As of Tue, 11 Aug, 2020 23:45
कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिम भैरहवा क्षेत्रमा देखिएको छ । जिल्लाका अन्य क्षेत्रमा भन्दा यहाँ बढी जोखिम देखिएको हो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक तथा कोरोना भाइरस न्यूनीकरणका फोकल पर्सन केदार नाथ शाहका अनुसार पहिले भन्दा अहिले भैरहवा क्षेत्र मात्रै नभई पूरै रुपन्देही जिल्लामा कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको बताए । शाहका अनुसार रुपन्देही जिल्लामा संक्रमितको संख्या ३४७ पुगेको छ । तीमध्ये ३१४ जना उपचारपछि पूर्णरुपमा निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने अझै पनि ३२ जना उपचारका क्रममा छन् । अहिलेसम्म रुपन्देहीमा १ जनाको कोरोना भाइरस संक्रमणले मृत्यु भएको छ । लकडाउन हटेसँगै रुपन्देहीमा अहिले पहिलाभन्दा बढी चहल पहल बढेको छ । भीडभाड बढेको छ । बैंक वित्तीय संस्था, हाटबजार, सडक जताततै भीड छ, तर कसैले पनि स्वास्थ्य सचेतना अपनाएको, सामाजिक तथा भौतिक दूरी कायम गरेको देखिँदैन, यसले गर्दा अझ जोखिम बढेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले विदुर नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकामा निशेधाज्ञा जारी गरेको छ । विदुर नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकामा १÷१ जनालाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै विदुर र ककनीमा निशेधाज्ञा जारी गरिएको हो । विदुर नगरपालिका–९ मा १ जना महिला र ककनी गाउँपालिका–५ मा १ जना पुरुषलाई मंगलबार कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले दिएको जानकारी अनुसार विदुर नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको बैठकको निर्णय सिफारिसको आधारमा नगर क्षेत्रमा निशेधाज्ञा जारी गरिएको हो ।
हिमाली जिल्ला मुगुका चारै स्थानीय तहसँगै सदरमुकाम गमगढी बजारमा यति बेला सलह कीराको प्रवेशले छ्यापछ्याप्ति भएका छन् । सलह कीरा पुनः मुगुमा प्रवेश गरेको छ । पाकिस्तानबाट भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको सलह कीरा अहिले हिमाली जिल्ला मुगुमा फैलिएका छन् । कर्णालीका प्रदेशको दैलेख, रुकुमपश्चिम, सल्यान, जाजरकोट हुँदै छिमेकी जिल्ला जुम्ला हुँदै आएको सलहको झुण्डो हिजो–आज जिल्लाको छायानाथ रारा नगरपालिका–१० का पापु, रोवालगायत सदरमुकाम गमगढी बजारमा देखिएको छायानाथ रारा नगरपालिका–१० का स्थानीय कृषक कर्णबहादुर भामले जानकारी दिए ।
उपत्यकाका स्थानीय तहमा भदौ १५ सम्म अत्यावश्यक काममात्र हुने
काठमाडौ उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहले प्रवाह गर्ने अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा भदौ १५ गतेसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका नगरपालिकाका मेयरहरुको संगठन ‘नगरपालिका मेयर फोरम’को सोमबार बसेको बैठकले अत्यावश्क बाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
रुकुम पश्चिममा खोलाले बगाउँदा एक बालिकाको मृत्यु भएको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखीम बढदै गए पछि रुपन्देही जिल्ला भित्रका बजारहरु सोमबार देखि बिहान ११ बजे बाट बेलुका ७ बजे सम्म मात्र सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । आईतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही भैरहवामा जिल्ला स्तरीय कोभिड १९ संकट ब्यबस्थापन केन्द्रको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकामा सलह देखिएको छ । हजारौंको संख्यामा देखिएका सलहले खेतीबालीमा धेरै क्षति पु¥याएपछि किसान चिन्तित बनेका छन् ।
एभोकाडो खेतीमा आकर्षण
सिन्धुलीमा पहिलो पटक एभोकाडोको खेती सुरु गरिएको छ । जिल्लाका स्थानीय किसानले व्यवसायीक रुपमा खेती थालनी गरेका हुन् । जिल्लाको जुनार पकेट क्षेत्रका रुपमा चिनिएको गोलञ्जोर गाँउपालिका–४ तीनकन्याका एक किसानले यहि वर्षबाट खेती सुरु गरेका छन् । जुनार व्यवसायीसमेत रहेका स्थानीय किसान लालबहादुर मगरले जुनारबाट भन्दा पनि फाइदा हुने देखिएपछि एभोकाडोको विरुवा रोपेका हुन् ।
जनप्रतिनिधिको बेवास्ता र लापरबाहीका कारण झापामा निःशुल्क मिटरको लाखौं बजेट फिर्ता भएको छ । झापाका अधिकांश विपन्न परिवारले विद्युत्को निःशुल्क मिटर पाउन सकेनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मिटर नभएका विपन्न परिवारको विवरणसहित निवेदन पठाउन सबै वडा कार्यालयसँग आह्वान गरेको थियो । तर, जिल्लाका अधिकांश वडाध्यक्षले वास्तै नगरेकै कारण बजेट फिर्ता भएको हो । केहीले चासो लिए पनि लापरबाही गर्दै विवरण पठाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बिर्तामोड शाखाले जनाएको छ ।
लमजुङमा ३ वर्षमा ८७ जनाले गरे आत्महत्या
लमजुङमा पछिल्लो समय आत्महत्याका घटनाहरु बढ्दै गएको पाइएको छ । समस्याको रुपमा विकराल बन्दै गइरहेको आत्माहत्याको कारण पत्ता लगाई न्यूनीकरण र समाधानका लागि बेलैमा सरोकारवालाहरुले चासो दिनु जरुरी देखिएको छ ।
जनसहभागिता जुटाउनै सकस
सरकारी निकायलाई विकासमा जनसहभागिता जुटाउनु काउसोजस्तै भएको छ । जनसहभागिता जुटाउन नसक्दा सरकारी अनुदान खर्चमा प्रभाव परेको छ । जनसहभागिता हुन नसक्दा जनतालाई सरकारी बजेट त हो, जसरी खर्च गरे पनि हुने भावनाको विकास भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको कार्यमूलक लेखापरीक्षणले नियमानुसार जनसहभागिता नजुट्दा सरकारी भुक्तानी बढी जाने, तोकिएअनुसार कार्य नहुने, काम भए पनि सेवाप्रवाह नहुने, निर्णय गरेर घटी जनसहभागिता जुटाउनेलगायतका समस्या किटान गरेको छ ।
जुम्लामा पुन कोरोना संक्रमीत भेटिएपछि अनिश्चितकालका लागि निषाधज्ञा जारी गरिएको छ । यहाँको चन्दननाथ नगरपालिका क्षेत्र र तिला गाउँपालिकाको ५ नम्बर वडालाई अर्को सूचना नहुन्जेल अनिश्तिकालिन शील गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले बताए । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शनिवार गरिएको पिसिआर परिक्षणको प्रतिबेदन अनुसार चन्दननाथ चन्दननाथ नगरपालिका – १ का एक जना पुरुष, वडा नं. ३ का एक जना महिला र वडा नं. ६ का एक जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएकोले थप संक्रमण फैलिन नदिनका लागि नगरपालिका सिल गरिएको डिएसपी लाल बहादुर धामीले बताए । त्यसैगरी तिला गाउँपालिका – ५ ढिमकोट गाउँमा एक जना महिनामा कोरोना संक्रमण भेटिएको छ ।
समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भेटिएपछि जिल्लाको ७ स्थानीय तहमा निशेधाज्ञा जारी गरिएको छ । शुक्रबार बसेको जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले समुदायस्तरमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नको लागि विदुर नगरपालिकाका, लिखु गाउँपालिकाका र सूर्यगढी गाउँपालिकाको सम्पूर्ण भूभागमा निशेधाज्ञा जारी गरिएको छ । यस्तै, बेलकोटगढी नगरपालिकाको ५,७, ८, १०, ११, १२ र १३ नम्बर वडा, पञ्चकन्या गाउँपालिकाको १, २ र ३ वडा, शिवपुरी गाउँपालिकाको ६, ७ र ८ वडा र ककनी गाउँपालिकास्थित पासाङ ल्हामु राजमार्ग आसपासका वडा नं १, २, ४ र ६ का सम्पूर्ण क्षेत्रमा शनिबार मध्यरातदेखि १० दिन सम्मलाई लागू हुने गरी निशेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले जानकारी दिए ।
संखुवासभाको शिलिचोङ पहिरोबाट बिस्थापित १ सय ३६ घरपरिवारका लागि सहयोग जुटाउने उद्देश्यले शिलिचोङ गाउँपालिका समन्वय समिति काठमाडौंले सुरु गरेको सहयोग संकलन अभियानमा १९ लाख ४२ हजार संकलन भएको छ ।
धौलागिरि गाउँपालिका–६ मराङस्थित ७ वर्षको बालक अर्जुन जुग्जाली टाउको पुरै खौरिएको । विद्यालयको चौरलाई आफ्नै घरको आँगन सम्झिएर रुँदै यताउता दौडिरहेका छन् । आमाको न्यानो काँख असार २५ गते आएको बाढीपहिरो खोसेपछि उनी अहिले बाबा धनबहादुर जुग्जालीले ७ वर्षीय बालकलाई जिन्दगीभर बाबा र आमाको माया दिनुपर्नेछ । उनले जीवनसँगिनी र २ छोरी गुमाएको पीडा ताजा नै थियो तर त्यही छोरा हेरेर चित्त बुझाउनुबाहेक अर्को उपाय पनि छैन ।